आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ?हेर्नुहोस यस्तो छ साउदी,कतार,मलेसिया लगायत देशको बिनिमय दर। |
आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ?हेर्नुहोस यस्तो छ साउदी,कतार,मलेसिया लगायत देशको बिनिमय दर।
August 10, 2021 August 10, 2021 adminLeaveaComment on आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ?हेर्नुहोस यस्तो छ साउदी,कतार,मलेसिया लगायत देशको बिनिमय दर।
आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ?हेर्नुहोस यस्तो छ साउदी,कतार, मलेसिया लगायत देशको बिनिमय दर। नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर भन्ने बुझन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
उदाहरणको लागी नेपालमा अमेरिकी डलको विनिमय दर १०० नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “ नेपाल राष्ट्र बैंक”ले गर्दछ ।
हे भगवान यसरी लियो यि बालिका ज्यान यो सर्पले।पूरा हेर्नुहोस
आज ह्वात्तै बढ्यो संक्रमित संख्या र मृत्यु दर।अब हुने भयो सबै बन्द?
तोलामा २० हजारले घट्यो सुनको मूल्य’हेर्नुस् कतिमा हुदै छ कारोबार
दशैं तिहारका लागि देशभर खुले सुपथमूल्य पसल,कुन वस्तुमा कति छुट?यति सस्तोमा किन्न पाइने?
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य,तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ?हेर्नु`होस्